Holtop akagadza zvebhizimisi ukama mikuru kunyika Asia, Europe uye North America, uye akawana mumwe yose mukurumbira pakupa yakavimbika zvigadzirwa, ruzivo kushanda unyanzvi uye kugamuchirwa rutsigiro uye mabasa.
Holtop acharamba vakazvipira basa adzikinure kwazvo vakarongeka uye simba okuponesa zvigadzirwa uye negadziriso kuderedza kushatiswa kwezvakatipoteredza, kuitira utano vanhu uye kudzivirira pasi redu.
ndiye aitungamirira mugadziri mu China kushandisa kugadzirwa mhepo kuti mhepo kupisa apore equipments. Umbwa muna 2002, yava kuna nokugadzira zvinhu kukura mune kupisa kupora kufefetedza uye simba rinoponesa mhepo mukugadzirisa equipments kwemakore anopfuura 16.
Mumakore utsanzi uye kukura, Holtop anogona kupa yakazara-siyana zvigadzirwa, kusvika 20 akatevedzana uye 200 nokurondedzerwa. The chigadzirwa siyana kunyanya anofukidza: Heat Recovery Ventilators, Energy Recovery Ventilators, Fresh Air Filtration Systems, Michina Heat Exchangers (Heat Wheels uye Enthalpy mavhiri), ndiro Heat Exchangers, Air Handling inokwana, etc.
Holtop rinotivimbisa yepamusoro zvinhu pamwe nenyanzvi R & D chikwata, vomuzana kirasi kugadzirwa zvivako uye yemhando Kwevadzidzi. Holtop ane nhamba kuzvidzora michina, National anotenderwa enthalpy Labs, uye yakabudirira vakapfuura certifications pamusoro ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE uye EUROVENT. Kunze, Holtop kurimwa nechigadziko anzverwa panzvimbo kubudikidza TUV Library.
Holtop ane vashandi 400 uye ndokwenguva nzvimbo dzinopfuura 30.000 mativi mamita. Annual kugadzirwa mano kupisa kupora michina rinosvika 100,000 pazvinhu. Holtop anopa OEM zvigadzirwa nokuda Midea, LG, Hitachi, McQuay, York, Trane uye Carrier. Seropafadzo, Holtop aiva mutengesi akakodzera Beijing Olympics 2008 uye Shanghai World Exposition 2010.